Ampidiro ny chat miaraka amin'ny tranokalanao ao anatin'ny 5 minitra | Martech Zone
Ampidiro ny chat miaraka amin'ny tranokalanao ao anatin'ny 5 minitra
Alakamisy, Septambra 1, 2011 Alakamisy Oktobra Oktobra 27, 2011 Douglas Karr
Over on WPEngine, Tsikaritro fa manana programa fifampiresahana an-tserasera mahafinaritra tokoa izy ireo izay nipoitra taorian'ny 45 segondra teo amin'ilay tranonkala. Betsaka ny mpanjifanay no nangataka vahaolana toy izany, ka nanao fangadiana kely aho ary gaga aho nahita izay hitako!
SnapEngage dia programa Chat tsotra tsy misy dikany ho an'ny tranonkalanao izay maharitra 5 minitra vao apetraka:
Voalohany, fenoy ny azy ireo widget ary ampidiro ny script ao amin'ny tranokalanao.
Manaraka izany, mifandray amin'ny 'mpitsidika' virtoaly ianao amin'ny Gtalk na Skype.
Dia izay… vita ianao! Tena matotra!
Ny sehatra dia manana tonony fanamboarana fanampiny misy ka nanao zavatra maromaro izahay:
Namboarinay ny bokotra ary manavao ny modely izahay (mitaky kaonty fandraharahana $ 49 / mo na lehibe kokoa).
Nanampy rohy "Chat with Us" izahay tao amin'ny Pejy Facebook (endri-javatra Beta).
Izahay dia manosika ny rakitra transcript ao amin'ny boaty.
Nanampy ny fampidirana Basecamp izahay (tsy andoavam-bola) mba hanombohan'ny resaka tsirairay kofehy amin'ny tetikasa vaovao nantsoinay hoe 'Leads'. Izy ireo dia mifangaro amin'ny CRM maromaro (ao anatin'izany ny SalesForce) sy ny helpdesks.
Nanampy mpiasa bebe kokoa izahay (mamela ka hatramin'ny 4 ny kaonty fandraharahana) ary namboarinay ny sarin'izy ireo.
Azonao atao ny manitsy ny bokotra hanombohana ny resaka na aiza na aiza amin'ny tranokalanao, nifidy ny lafiny tsara izahay:
Tsindrio ny bokotra dia misokatra ny chat. Raha tsy misy olona hamaly ny fanontaniana dia mandefa mailaka fotsiny aminao izy io. Raha eo amin'ny Internet ianao, dia mipoitra ao amin'ny Skype na GTalk tsirairay avy!
Zahao ireo fiasa rehetra an'ny SnapEngage ao amin'ny pejin'ireo endri-javatra asehon'izy ireo - sady mahery no mora vidy! Ity dia mpamatsy fotoana mahavariana ho an'ireo olona mitsidika ny tranokalanao ary manome fotoana lehibe ahazoana mitarika izay mety tsy hahita izay tadiaviny ary mahafoy tanteraka ny tranokalanao.
Oh… ary eny, rohy mifandraika amin'izany!
Vidin'ny indostrian'ny indostrialy sy torohevitra
PunchTab: valisoa ara-tsosialy sy ny tsy fivadihana amin'ny tranonkala rehetra